Fanoherana ‘Fitsipaham-pitokisana’ Niteraka Fanakatonana Parlemanta · Global Voices teny Malagasy
Krizy Ao Amin'ny Parlemantan'i Maldiva
Voadika ny 11 Aogositra 2017 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, বাংলা, English
Tamin'ny Alatsinainy maraina ny 31 Jolay, nafàna ny raharaha politika tao Maldiva satria nanao fihetsiketsehana tao amin'ny People's Majlis, parlemanta ao Maldiva ireo mpanohitra ao amin'ny parlemanta, ary nihodidina sy niaro ny filohan'ny parlemanta, Abdulla Maseeh Mohammed ny miaramila. Nitranga herinandro monja taorian'ny nandroahan'ny mpitandro ny filaminana sy ny miaramila an-keriny ireo mpanao lalàna mpanohitra tao amin'ny Majlis sy nisamborana mpanao lalàna roa ny atoandron'ny 24 Jolay tao Male renivohitra izany.
#Maldives Majlis-mbahoaka – Mihodidina ny parlemanta ny miaramila.
Tamin'ny 3 Jolay, nametraka fitsipaham-pitokisana an'i Abdulla Maseeh Mohamed izay ahitana mpanasonia 45 amin'ireo mpikambana 85 ao amin'ny parlemanta ny antoko mpanohitra efatra Maldives United Opposition (MUO), sonia 42 no takiana ho an'ny fitsipaham-pitokisana. Mpiara-dia lehibe amin'ny filoha Maldiva Abdulla Yameen Abdul Gayoom ny filohan'ny Antenimiera, Maseeh, izay miatrika fiampangana maromaro momba ny kolikoly hanenjehana azy.
Mifototra amin'io didim-pitsarana io, tafala tamin'ny sezany ireo mpanao lalàna mpanohitra 4, izay nahatonga ny 24 jolay nokasaina hanaovana ny latsa-bato fitsipaham-pitokisana ny tsy fahaizan'ny filohan'ny parlemanta satria nilatsaka ambanin'ny isa kely indrindra ilaina 42 ny isan'ny sonia hanaovana fitsipaham-pitokisana tarihin'ny mpanohitra. Niteraka korontana tao amin'ny firenena izany. Nisioka ny solombavambahoaka mpanohitra Rozaina Adam
Nakaton'ny governemanta Maldiviana ny Parlemanta, narindran'ireo mpitandro filaminana, ary nampitandrina ny mety hisian'ny famoretana hetsi-panoherana. Tamin'ny 24 Jolay, saika ny mpanao lalàna mpanohitra rehetra no nanao diabe nankany amin'ny Majlis, nahavita nanapaka ny sakana voalohany ary niditra tao amin'ny tokontanin'ny parlemanta. Namaly tamin'ny fandroahana sy fanesorana ireo mpanao lalàna mpanohitra ho any ivelany ny miaramila, nanohy nanao fihetsiketsehana niaraka tamin'ireo mpanohana 300 teo ho eo tao izy ireo. Niparitaka tany amin'ny mpanao fihetsiketsehana ny tifitra ranon-tsakay ary olona maromaro no nosamborina, anisan'izany ireo mpanao lalàna roa sy mpanao gazety maromaro.
Solombavambahoaka @faya_i@MariyaDidi@MohamedAmeeth noroahin'ny @MNDF_Official tao amin'ny parlemanta.
Niaro ny fampiasana ny Tafi-piarovam-pirenena Maldiva ny fanambarana an-gazety navoakan'ny Sekretarian'i Majlis, milaza ny “fanambarana diso” momba ny fifehezan'ny miaramila ny parlemanta.
Nanao tetezamita nankany amin'ny demaokrasia i Maldiva tamin'ny taona 2008 saingy niaina tsy fahatomombanana ara-politika ny firenena rehefa voatery niala noho ny filazana fa “fanonganam-panjakana” tamin'ny taona 2012 ny filoha voafidy tamin'ny fomba demaokratika voalohany, Mohamed Nasheed,. Nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nampifanditra tamin'ny taona 2013 ny filoha Abdulla Yameen. Mihozongozona noho ny didy jadona ny firenena satria mitombo hatrany ny fiampangana ny filoha Yameen noho ny fanampenam-bava ny mpanohitra sy ny fanagadrana ireo mpanohitra ara-politika, anisan'izany i Nasheed, izay voalaza fa voampanga tamin'ny fiampangana namboamboarina.
Natsangana ny antoko iraisan'ny mpanohitra tarihan'i Nasheed, filoha teo aloha sy lehiben'ny antoko Demaokraty Maldiviana, izay monina an-tsesitany amin'izao fotoana izao ao amin'ny Fanjakana Mitambatra, mitsoaka sazy an-tranomazina ao Maldiva ny Mpanohitra Tafaray ao Maldiva. Ny tena tanjon'izy ireo dia ny famerenana ny demaokrasia amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny fanesorana ny filoha Abdulla Yameen Abdul Gayoom amin'ny fomba ara-dalàna ary mitsara azy noho ny famotsiam-bola sy fiampangana hafa.
Tamin'ny volana septambra lasa teo, nampiseho ny fomba nanodikodinan'ny filoha Yameen sy ny mpiara-dia aminy vola an-tapitrisany dolara, fanomezana kolikoly ho an'ny mpitsara sy manampahefana ambony hafa, sy nampiasa hery hanesorana ireo mpiasam-panjakana mijoro ny “Stealing Paradise (Mangalatra Paradisa),” tatitra fanadihadiana avy amin'ny Al Jazeera. Nolazain'ny governemanta Maldiva fa mitongilana sy manala-baraka ny tatitra fanadihadiana.
Naneho ny ahiahiny momba ny famoretana mpanohitra sy haino aman-jery ny Firenena Mikambana taorian'ny fanakatonana ny parlemanta.